Homeसमाचारट्वाई`लेटमा बच्चा जन्माएर चुपचाप क्लासमा बसिन् ९ कक्षाकी यी छात्रा (भिडियोसहित)
September 14, 2021 admin समाचार 2238
इन्टरनेट जब सुरु भयो सबै कुरा बद्लियो र ज्ञान स|बैमा समान रूपमा पुग्यो । तर यो इन्टरनेट को सिकार भए आजका नौ जवानहरू । जब इन्टरनेट मोबा|इल सम्म पुग्यो साना, साना स्कूल पढ्ने बच्चा`हरूको हातमा पनि पुग्यो । इन्टरनेटले यति असर पार्यो यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ ।
समाजमा यति धेरै असर परी सक्यो कि इन्टरनेटको असरले बच्चा`हरूको भविष्य अन्धकार भैराछ । यो भिडियो हेर्नु होला । यो भिडियो हेरेर को कदम अगाडी बढाउन लाई रोक्न सकियोस् । धेरै आमाबाबुलाई यो थाहा होस् कि इन्टरने|टको कारण के भइरहेको छ ।
यो घट`ना हो चिनको । चिनको एग्री`कल्चर वकेशनल कले`जमा एक दिन एउटा लेडिज कलेज को बाथरूममा जाँदा एउटा सानो बच्चा रोएको आवाज आउँछ ।जब मान्छे`हरूले लेडिज ट्वाईलेटको ढोका खोले र उनी|हरूले त्या जे देखें हैरान भए । एउटा सानो बच्चा ट्वाइटेट को सिटमा फसेको थियो र कराईरहेको थियो ।
उसलाई निकाले|र हस्पि`टल लगे । तर मान्छेहरू यो सोच्न थाले आखिर यो बच्चा आयो ? कसको बच्चा हो ? सि.सि टि. भि फोटेज बाट थाहा भयो की एउटा केटी त्यो ट्वाईले|टमा गएकी रहिछिन् । जब त्यो केटीलाई बोलाएर शोधपु|छ गर्दा तब उसले भनिन् । यो बच्चा मेरो हो ।
यी केटी नौ महिनादेखि प्रेगनेन्ट रैछिन । उसले यो कुरा लुका`एकी रहेछिन|आफ्नो रूममेट लाई पनि । एक दिन अचान`क उसको पेटमा दुख्न थालेछ र उ कुदेर लेडिज ट्वाइलेटमा गएकी थिइन् र त्यहाँ उसले बच्चालाई जन्म दिइन् । उनले बच्चा`को नाललाई का`टेर बच्चालाई ट्वाईलेटमा फाले`की रहिछिन् ।
यति सानो बच्चा|लाई यसरी फालियो भने हामीले बच्चा`को महत्त्व नै बुझ्न सक्दैनौं। यो केटीले अन्जानमा जिन्दगी ब`र्बाद बनाइरहेकी थिइन्। जरुरी थियो कि उस`लाई सहि बाटोमा हिँडाउन परिवारको जरुरी थियो । तर उसलाई मिलि`रहेको थिएन,। त्यसैले से`न्सर गर्न जरुरी छइन्टरनेट लाई ।
अलिफ खान र मोहन खड्काले ल्याए एक पटक सुन्नै पर्ने गीत ‘गाह्रो भो बाच्नलाई’ (भिडियो सहित)
May 25, 2021 admin समाचार 3244
मोहन ख’ड्का एउटा चर्चित नाम हो पछिल्लो समयको सांगितिक बजारमा नेपाली लोक गित संगित चर्चा परिच’र्चामा रहेको छ । समस्त लोक दो’होरी गित सबै दर्शक स्रोताको नजरमा लोकप्रिय भन्दै गएका छन् । कति गितहरुले त
कोरोना भाइरसलागे पछि रानु मण्डल फेरी सडकमा
October 12, 2020 admin समाचार 8718
सड’कमा गीत गाउँदै हि’ड्ने रानु मण्ड’ल एक वर्ष अघि ए’काएक स्टार बनिन् । उनले सडक’मा गीत गाउँदै हिडेको भि’डियो सा’र्वजनिक भएप’छि अवसर पाइन् । रेल्वे स्टे’शनमा बसेर गीत गाउने रानु मण्ड’लको भाग्य सन् २०१९ मा
January 8, 2021 admin समाचार 5085
एकै परिवारका तीन जनाले दे’ह त्या’ग गर्नु कुनै चानचुने कुरा हैन । त्यो पनि नवजात शिशुको साथमा । दे’ह त्याग गरेकी एक जना आमाले आफ्नै १० महिने शिशुलाई पहिला रुखको हाँh’गोमा झुj’ण्ड्याaएर त्यसै हाँ’hगोमा उनी